पोन्तेवेद्रमा के गर्ने: स्मारक, प्राकृतिक सौन्दर्य र ग्यास्ट्रोनोमी | Absolut यात्रा
पोन्तेवेद्रमा गर्ने कुराहरु
पोन्तेवेद्रमा के गर्ने? यो सही शहर हो, हामी आफैलाई यो प्रश्न सोध्नु को लागी सही अर्थ बनाउँछ R Bajas Bajas अरूको पर्यटन लोकप्रियता कहिल्यै उपभोग गरेको छैन Galicia La Coruña जस्तै, स्यान्टियागो डे कम्ोस्टेला र पनि Lugo।
जहाँसम्म, पोन्तेवेद एक स्वागत शहर हो, एक विशाल स्मारक विरासत संग, एक अद्भुत प्रकृति वातावरण र एक स्वादिष्ट ग्यास्ट्रोनोमी। मानौं कि यी सबै पर्याप्त छैनन्, आज एक छ दिगो शहर जसले पुरस्कार प्राप्त गरेको छ UN आवास, जसले यसलाई सहर सेवा र गतिशीलताको गुणस्तरको साथ बाँच्नको लागि आरामको लागि मान्यता दिन्छ। यदि तपाईं पोन्तेवेद्रमा के गर्ने भनेर पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई आमन्त्रित गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
1 पोन्तेवेद्रमा के गर्ने: यसको स्मारकहरूको भ्रमण गर्नुहोस्
1.1 सान्ता मारिया ला मेयरको शाही बेसिलिका
1.2 सान्तो डोमिन्गो कन्भेन्टको भग्नावशेष
1.3 पेरेग्रीना चर्च
1.4 अन्य धार्मिक स्मारकहरू
1.5 पाजोस, पोन्तेवेद्रमा हेर्नको लागि अर्को अचम्मको कुरा
1.6 फोन्सेकाको घर
1.7 अन्य नागरिक स्मारकहरू
1.8 वर्गहरूको भ्रमण गर्दै, पोन्तेवेद्रमा के गर्नु पर्ने बीचमा आवश्यक छ
1.9 पोन्तेवेद्रको आधुनिकतावादी वास्तुकला
1.10 पोन्तेवेद्रको प्रान्तीय संग्रहालय
1.11 बुर्गो ब्रिज
2 पोन्तेवेद्रमा के गर्ने: यसको सुविधायुक्त वातावरणको आनन्द लिनुहोस्
3 पोन्तेवेद्रमा के खानुहुन्छ
4 पोन्टेवेद्रामा यात्रा गर्नु कहिले राम्रो हुन्छ
5 कसरी पोन्तेवेद्रा मा पुग्ने
पोन्तेवेद्रमा के गर्ने: यसको स्मारकहरूको भ्रमण गर्नुहोस्
पोन्तेवेद्रको धेरै जग पौराणिक कथामा समाहित छ। यो भन्छ कि Teucroयसमा एक पात्र हो ट्रोजन युद्ध, आफ्नो बुबा, Telamon द्वारा निर्वासित, र साइरन Leucoiña द्वारा निर्देशित पछि क्षेत्र आए। ठाउँको प्रेममा उनले शहरको स्थापना गरे हेलेन्स, जुन वर्तमान पोन्तेवेद्र हुनेछ।
अधिक ऐतिहासिक कठोरताको तथ्य यो छ कि यो दुईको अस्तित्वको बारेमा थाहा छ पूर्व रोमन कास्ट्रो के शहर मा अब र ल्याटिन बस्ती को के हो ट्रोक्वा। जे भए पनि, पोन्तेवेद्राको धेरै शताब्दीयौंको इतिहास छ जुन यसको समृद्ध स्मारक सम्पदामा झल्किन्छ। यसलाई जानौं।
पोन्तेवेद्रा को पुरानो शहर को मान्यता हो ऐतिहासिक कलात्मक परिसर १ 1951 XNUMX१ पछि। यसको महत्वको बारेमा तपाईंलाई एउटा विचार दिन, यो केवल ११ वर्ष पछि यसलाई प्राप्त भयो स्यान्टियागो डे कम्ोस्टेला। यस कारणका लागि, यसको चासोको सबै भवनहरूको बारेमा यहाँ कुरा गर्न असम्भव छ र हामी केवल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्नेछौं। तर पहिलो, हामी उनको अवशेष उल्लेख गर्नेछौं मध्यकालीन पर्खाल, जहाँबाट तपाईले अर्जोबिस्पो मालवार गलीको क्रनेलेटेड कपडा देख्न सक्नुहुनेछ।
सान्ता मारिया ला मेयरको शाही बेसिलिका
क्याननहरू अनुसरण गर्दै १ XNUMX औं शताब्दीमा निर्मित ढिलो गोथिकयसले पुनर्जागरण र पोर्तुगाली मनुएलिन शैलीहरूको तत्वहरू पनि प्रस्तुत गर्दछ। यो यसको मूल्यवानमा स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ प्लेटरेस्क अनुहार जुन लगभग एक वेदीपिस हो।
एक बेसिलिका योजनाको साथ यसको भित्री भागको बारेमा तपाईको बरबको बेदीसहित यसका बरब्दी वा क्रिब वाल्ट्स र चैपलले ख्रीष्टको जस्तो झुण्ड्याइनुहुनेछ। ला Purísima को, जहाँ आशाको भर्जिन, पोन्तेवेद्रको संरक्षक संत; भर्जिन डोलोरोसाको, जसमा यसको रिकिलि Christ क्राइष्ट, वा ग्रेटर छ, जहाँ तपाईं मूर्तिकारले काठ र अखरोटको वेदीपीस देख्न सक्नुहुन्छ अधिकतम Magariños.
सान्तो डोमिन्गो कन्भेन्टको भग्नावशेष
हाल, तिनीहरू पोन्तेवेद्रको प्रान्तीय संग्रहालयको भवनका भाग हुन्, जुन सुन्दरमा अवस्थित छन् पाजो डे कास्ट्रो मोन्टेआगुडो, १ XNUMX औं शताब्दीमा निर्मित। तपाईं अझै १ today औं शताब्दीदेखि नै पाँच गोथिक वानहरू भएको पुरानो चर्चको टाउको देख्न सक्नुहुन्छ। भग्नावशेषहरू छन् राष्ट्रिय स्मारक 1895 बाट।
यदि तपाईं पोन्तेवेद्रको मौलिकताका लागि यात्रा गर्नुहुन्छ भने यो मन्दिर आवश्यक छ। छ स्केल्पप प्लान्ट, जसले यसलाई व्यावहारिक रूपमा गोलाकार बनाउँछ। १ architect औं शताब्दीमा यसको निर्माण शैलीको हिसाबले निर्मित, नियोक्लासिकलमा बारोक मिलाउँछ। र यो भित्र एउटा चित्र राखिएको छ तीर्थयात्रा, पोन्तेवेद्रा र क्यामिनो डे स्यान्टियागो पोर्चुग्सको प्रान्तको संरक्षक।
अन्य धार्मिक स्मारकहरू
पोन्तेवेद्र शहरमा धार्मिक वास्तुकलाको प्रभावशाली विरासत छ। तपाईको भ्रमणका बीचमा पनि हुनुपर्दछ सान फ्रान्सिस्कोको चर्च, गोथिक क्याननको अनुसार १th औं शताब्दीमा निर्मित, र त्यो सान बार्टोलोमाको हो, बारोक शैलीको र यसले वर्जिन अफ होपको अर्को छवि राख्दछ।
कन्भेन्टको सन्दर्भमा, हामी तपाईंलाई एउटा यो हेर्न सल्लाह दिन्छौं स्यान्टाक्लारा, १th औं र १th औं शताब्दीको बीचमा निर्मित, र त्यो डोरोटियन बहिनीहरू, जुन घर गर्दछ Apparitions को श्राइन, जहाँ बहिनी लुसिया, को घटनाहरु को एक केटी फातिमा.
अन्त्यमा, मठहरूको लागि, यो ती भ्रमण गर्ने लायक छ लेरेज, बाहिरी क्षेत्रमा र बारोक शैलीमा अवस्थित छ, र पोयो, पनि पोन्तेवेद्राबाट चार किलोमीटर र रेनेसन र बारोक सुविधाहरूको संयोजन गर्दै।
पाजोस, पोन्तेवेद्रमा हेर्नको लागि अर्को अचम्मको कुरा
एउटा पुरानो भव्य शहरको रूपमा, पोन्तेवेद्रसँग भव्य घरहरूको प्रभावशाली सम्पदा पनि छ, जसलाई गलिसियामा पाजोज भनेर चिनिन्छ। सबै भन्दा पुरानो हो पाजो डे काड्रो डे लस रोमे, Marín मा स्थित। यो १ tower औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो यद्यपि यसको टावर १ XNUMX औं शताब्दीको हो र यसमा १ parts औं शताब्दीका अंशहरू पनि छन्।
यससँगै, यो भ्रमण गर्न नबिर्सनुहोस् घण्टीको घर, एक गोथिक-पुनर्जागरण सुन्दरता; एउटा वामन्डे, पुनर्जागरण को विशिष्ट; त्यो पुरानो पत्र र सान्ता मारियाको रिक्टोरल। साथसाथै को पाजोस मसेडा को गणना, वर्तमान प्याराडोर डी टुरिस्मो; को गागो र मोन्टेनेग्रो र को मारियो डे लोबेरा, दुबै नवजागरण; बाट मुगर्तेगुइ, गलिसियामा सब भन्दा उल्लेखनीय सिभिल बारोक इमारतहरू मध्ये एक, र कास्ट्रो मोन्टेआगुडो, जो पोन्तेवेद्रको प्रान्तीय संग्रहालय हो, जसको हामी पछि कुरा गर्नेछौं।
यो सुन्दर नियोक्लासिकल भवन १ th औं शताब्दीको सुरूमा निर्माण गरिएको थियो। यसको पेडिमेन्ट बाहिर खडा छ, दुई पखेटा ग्रिफिनले मुकुट लगाएको छ र जसले आठ स्तम्भहरूको साथ पोर्टिको बनाउँछ। यसको प्रत्येक अन्तमा त्यहाँ इजिप्टियन स्फिंक्स छ जुन प्रवेश द्वारको रक्षा गर्दछ। यो अहिले छ प्रान्तीय ऐतिहासिक संग्रह.
अन्य नागरिक स्मारकहरू
माथिको साथमा, तपाईं पोन्तेवेद्रामा अन्य नागरिक निर्माणहरू देख्न सक्नुहुन्छ जुन मुख्य रूपमा प्रतिक्रिया गर्दछ एक्लेक्टिकिज्म १ th औं शताब्दी। यो कुरा हो टाउन हॉल, फ्रान्सेली लुइस XV शैली बाट प्रेरित, र राम्रो मेन्डोजाको दरबार, जसले पनि गैलिक वास्तुकलाबाट प्रभाव देखाउँदछ। यो पनि हेर्न लायक छ प्रान्तीय परिषद को दरबार, पुरानो सान फर्नान्डोको ब्यारेक र को निर्माण बैंकको स्पेन.
वर्गहरूको भ्रमण गर्दै, पोन्तेवेद्रमा के गर्नु पर्ने बीचमा आवश्यक छ
यदि हामीले गालिसियन शहरको एक विशिष्टता उल्लेख गर्नु पर्छ भने यो हुन्छ यो भएका ठाउँहरूको ठूलो संख्या। तिनीहरू मध्ये केही मध्यकालीन छन् र तिनीहरूमा बसोबास गरेको गुण्डको नाम बोक्दछन्। उदाहरण को लागी, हामी तपाईंलाई को बारे मा बताउँछौं द स्मिथी, को रूपमा कार्य गर्दछ प्लाजा मेयर र जसको बिचमा १ source औं शताब्दीमा उही नामको स्रोत हो। एक जिज्ञासाको रूपमा, हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि यसले शहरको लोकप्रिय नारा मध्ये एउटालाई जन्म दिएको छ, जसलाई गालिसियालीबाट अनुवाद गरिएको छः «पोन्तेवेद्रा राम्रो शहर हो, यसले यात्रीहरूलाई पिउँछ, हेरेरियाको फोहोरा, स्यान बार्टोलोमीको वर्गमा».
जे भए पनि, यति लामो सूचीबाट बोर नहोउन्, हामी पनि वर्गको उल्लेख गर्नेछौं तीर्थयात्रा, जहाँ उही नामको सुन्दर चर्च छ र जसको बारेमा हामी तपाईंलाई पहिले नै कुरा गरिसकेका छौं; त्यो Teucro, सुन्तला रूखहरूले फ्रेम गरीएको; को दाउरा, यसको पाजो र यसको पारम्परिक घरहरू साथ आर्केडहरू, र त्यो भर्दुरा, तपस बारहरूले भरिएको।
मन्डेज न्यूज स्क्वायर
तर बाँकी दुई भन्दा बाहिर उभिन सक्छ। एउटा बहुमूल्य छ मन्डेज न्यूज वर्ग, जुन को आर्क को माध्यम बाट पहुँच गरीएको छ क्रुज y मोन्टेनेग्रोको घर। र अर्को एक हो Curros Enriquez, यसको मनमोहक फ्रान्सेली शैली अटारी भवन र satyrs को झरना संग, जो पानी प्रवाह गर्न जिब्रो द्वारा तान्न पर्छ।
र यी वर्गहरूको पछि, मध्यकालीन सडकहरूको एक राम्रो संख्याले पुरानो शहर बनाउँदछ जुन हामी तपाईंलाई हेर्न सल्लाह दिन्छौं। उदाहरण को लागी, Rúa Dos Soportales, जहाँ लोकप्रिय क्याफे सभोय छ; को रिया रियल र र्या मानुएल क्विरोगा वा पसलहरूको सडक.
पोन्तेवेद्रको आधुनिकतावादी वास्तुकला
ग्यालिसियन शहरको अन्तहीन वास्तु सम्पदा आधुनिक संख्याका भवनहरूले पूरक हुन्छ। पहिलो मध्ये, थोपेको Valle-Inclán संस्थान; अचम्मको कुरा पाजो डे लुरिजन, केन्द्रीय भवन पोष्ट; एउटा आधुनिक क्याफे, जसको आन्तरिक पनि आधुनिकतावादी छ, र तथाकथित भिल्ला पिलर, जसले शैलीलाई भारतीय वास्तुकलाको विशिष्ट सुविधाहरूसँग जोड्दछ।
पोन्तेवेद्रको प्रान्तीय संग्रहालय
पाजो डे क्यास्ट्रो मोन्टेआगुडोमा अवस्थित छ, जुन हामीले तपाईंलाई भनिसकौं, यद्यपि यो पछि अरू भवनहरूमा पनि विस्तार भएको छ, यो सहरको मुख्य संग्रहालय हो। यस प्रकारका अन्यहरू जस्तै यसले कलात्मक वस्तुहरूको विविधता प्रदर्शन गर्दछ। तर, ती विपरीत, यो एक छ ठूलो मूल्य.
यो कुरा पनि हो रोमन अवधि सुनार संग्रह र पहिले पनि। र को चित्रहरु बाट पनि फ्रान्सिस्को डे गोया र को जोआक्विन सोरोला वा पवित्र कला टुक्रा। यो सबै बिर्सनु हुँदैन सान्तो डोमिन्गोको भग्नावशेष, जसको चित्रण टाउको हो, जैसा कि हामीले भनें, एक राष्ट्रीय स्मारक।
हामी हाम्रो पुरानो पुलले पोन्तेवेद्रको स्मारकहरूको टु end्गो समाप्त गर्नेछौं जसले शहरलाई यसको नाम दियो। १२ औं शताब्दीमा पहिलेको रोमी एकमा निर्मित, यो पार गर्दछ लेरेज नदी र यसको धेरै तल्लो मेहराबहरूको लागि बाहिर खडा छ।
पोन्तेवेद्रमा के गर्ने: यसको सुविधायुक्त वातावरणको आनन्द लिनुहोस्
ग्यालिसियन शहरको ठूलो संख्या छ पार्क जहाँ तपाईं आराम र प्रकृति संग सम्पर्कमा रहन सक्नुहुन्छ। ती मध्ये, हामी तपाईंलाई उद्धृत गर्नेछौं मारिस्मास डेल अल्बा पार्कको क्याम्पोलong्गोको Valdecorvos वा त्यो लुरिजन, जुन गलिसियामा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण बोटानिकल गार्डेनहरू मध्ये एक हो।
तर सबै भन्दा माथि हामीले हाइलाइट गर्नुपर्दछ मूर्तिकला टापु पार्क, जुन तपाईं हिँडेर पुग्न सक्नुहुन्छ जुन लेरेज नदीको किनार पछिको छ। यसमा तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय लेखकहरूको बाह्रवटा मूर्तिहरू देख्नुहुनेछ जसको सामान्य डिनोमिनेटर भनेको उनीहरूले आफ्नो प्राकृतिक वातावरणसँग मानिसको सम्बन्ध देखाउँछन्।
हामी तपाईंलाई यो भ्रमण गर्न सल्लाह दिन्छौं अलामेडा डे पोन्तेवेद्रा, १ th औं शताब्दी द्वारा डिजाइन गरिएको पार्क रोड्रिग्ज सेस्मेरो एक सुन्दर ब्यान्डस्ट्यान्ड र चित्रकारको टाइल सहित कार्लोस भतिजा। यद्यपि, सम्भवत सबैभन्दा सुन्दर प्रवेश द्वार हो, दुई ठूला स्तम्भहरू सिंहका साथ मुकुट। यो सबै बहुमूल्य बिर्सनु बिना कोभो टापु, महान पारिस्थितिक मूल्यको एक प्राकृतिक सेटिंग।
अर्कोतर्फ, शहर बाहिर, हामी तपाईंलाई एक जस्तो मार्गहरू लिन सल्लाह दिन्छौं Gafos नदीको फ्लुभियल पथ, छ किलोमिटर विस्तारको साथ र असाधारण सौन्दर्यको साथ। र त्यो पनि एउटा हो जुन माध्यमबाट पार हुन्छ पोन्टिलिन डे क्यास्ट्रो वन पार्क, अझै अघिल्लो भन्दा छोटो तर कम सुन्दर छैन, र रियास बजासको क्यामेलियाको मार्गजसको नायक यो फूल हो तर जसमा प्रभावशाली परिदृश्य पनि छ।
पोन्तेवेद्रमा के खानुहुन्छ
तपाईं पोंटेवेद्रा भ्रमण गर्नु र यसको विशिष्ट भाँडा खान मन पराउनु छैन, यो असाधारण ग्यालशियन गेस्ट्रोनोमीको उत्तम उदाहरण हो। सबै भन्दा पहिले, तपाईं संग राम्रो छ एट्लान्टिक माछा र शेलफिस। यस अर्थमा हस्ताक्षर भाँडा हो अक्टोपस फेरा, ला Hake Galician, the मटरको साथ कन्जर ईएल वा टर्बोट। तर सबै भन्दा माथि lamprey आफ्नै रगत मा पकाएको। र हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन्छौं क्र्याब सूप, ला चकलेट संग झींगा वा रास बजासको शैलीमा स्केलपहरू.
अक्टोपस एक फेरा
मासु पछाडि पछाडि छैन किनभने पोन्टेवेद्रा प्रान्तको क्षेत्रमा एक भव्य गोमांस छ। मोआना। र त्यस्तै ठ्याक्कै सुँगुरको मासु हो, उदाहरणका लागि मा शलजम शीर्षमा ल्याकन र मा बारबेक्यू.
डेसर्टको बारेमा, तपाइँसँग छ खिर, लास क्यान्स क्रीमले भरियो, the दही, लास भराई र राम्रो, जो एक प्रकारको पक्राउहरू हुन्। पिउन, भव्य को एक गिलास छ Albariño दाखमद्य र, खानाको एक पराकाष्ठाको रूपमा, थोरै कफी मदिरा वा को जलेको.
पोन्टेवेद्रामा यात्रा गर्नु कहिले राम्रो हुन्छ
ग्यालिश शहरमा एक छ समुद्री मौसम, चिसो जाडो र तातो गर्मी संग। पहिलेको तापक्रममा औसत सात डिग्री सेल्सियसको औसत रहन्छ, जबकि ग्रीष्म easilyतुमा तिनीहरू सजिलै reach० सम्म पुग्न सक्दछन्। यसको अंशको लागि, वर्षा प्रशस्त छ र वर्षभरि वितरण गरिन्छ। जे होस्, गलिसियाका अन्य ठाउँहरूको तुलनामा यो पानी कम वर्षा हुन्छ.
तसर्थ, पोन्तेवेद्र भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समयहरू हुन् वसन्त y गर्मी। थप रूपमा, अगस्ट महिनामा तीर्थयात्रा, प्रान्तको संरक्षक, र शहर आगन्तुकहरू र एनिमेसनले भरिन्छ।
कसरी पोन्तेवेद्रा मा पुग्ने
पोन्तेवेद्रको नजिकको एयरपोर्ट हो पेग्नोइर, Vigo मा, जुन करिब तीस किलोमिटर टाढा छ। यद्यपि, एरोड्रोमबाट टाढा जान तपाईंसँग बसहरू छन्। यी सन्दर्भमा, तपाईं मा गालिसियन शहर मा यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ बस स्पेन को मुख्य शहरहरु बाट।
अलामेडा डे पोन्तेवेद्र पार्क
वा, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ रेलवे। स्टेशन शहरको दक्षिणी भागमा अवस्थित छ र दुबैसँग जोडिएको छ मैड्रिड जस्तै गलिसियामा मुख्य शहरहरू जस्तै।
तपाईं आफ्नै कारमा पनि यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। सडक जुन तपाइँलाई पोन्तेवेदरामा लगियो AP-9 वा हो एट्लान्टिक राजमार्ग, जुन पोर्चुगल सीमासँग जोडिन्छ। त्यसो भए तपाईले लिनु पर्छ PO-10, जुन शहरको रिंग रोड हो, बाहिर निस्कनको लागि जुन तपाईंलाई रूचि छ।
अन्तमा, पोन्तेवेद्रको वरिपरि घुम्न तपाईंसँग थुप्रै लाइनहरू छन् शहर बसहरु। र तपाईं पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ साइकल। शहरमा कार ट्राफिकविना ठुलो क्षेत्रहरू छन् र जहाँ यो छ, यो प्रति घण्टा तीस किलोमिटरमा सीमित छ। जहाँसम्म, पोन्तेवेद्रा एउटा सानो शहर हो र, त्यसैले, तपाईंलाई भ्रमणको लागि उत्तम छ। हिड्दै.
अन्तमा, यदि तपाईं सोचिरहनु भएको थियो भने Pontevedra मा के गर्नेयहाँ हाम्रो स्मारकहरू भ्रमण गर्न, यसको सुन्दर प्राकृतिक वातावरण अन्वेषण गर्न र यसको ग्यास्ट्रोनॉमीको मजा लिनको लागि मार्गनिर्देशन छ। तपाईं उनलाई भेट्न के गर्दै हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » पोन्तेवेद्रमा गर्ने कुराहरु
संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमण गर्न आधारभूत आवश्यकताहरू: ESTA, बीमा र अधिक